Umculi kaMaskandi usefuna ukugcwalisa iMoses Mabhida | News24
Umculi kaMaskandi usefuna ukugcwalisa iMoses Mabhida
eThekwini - Umculi kaMaskandi uKhuzani "Indlamlenze" Mpungose uhluleke ukuzibamba ezinkundleni zokuxhumana esongela uCassper Nyovest.
Lokhu kulandela imibiko ethi uNyovest usebheke ukuzogcwalisa inkundla iMoses Mabhida ngemuva kokufeza izifiso zakhe nge-FNB.
Ngempelasonto, uCassper uqophe umlando ngokugcwalisa inkundla yezemidlalo iFNB njengoba edalule ukuthi kuthengwe amathikithi angu-68000.
OLUNYE UDABA:Usolwa ngokudla imali yabantu uKhuzani Mpungose
Bekuqala ngqa emlandweni wakuleli ukuthi kube nomculi ogcwalisa le nkundla.
UCassper usezakhele igama kanye nodumo olukhulu ngemikhankaso yakhe ye-#FillUp kule minyaka emithathu eyedlule.
Yize bebaningi abakuthakasele ukwazi ukuthi uCassper usezoyaphi njengoba eselizongizile edolobha laseGoli, kunomculi kaMaskandi ongayithandi eyokuthi uCassper eze kwelikaMthaniya.
Enkundleni u-Instagram uKhuzani, uthi ufuna ukuyigcwalisa kuqala lenkundla yaseThekwini ngaphambi kokuba uCassper akwenze.
"Akukho Cassper wachanasa kwaZulu-Natal sikhona,"kubhala yena.
Akengibongele uCassper ngokuqopha umlando ngokugcwalisa iFNB stadium.Sizwileke mfowakithi ukuthi uthi usufuna ukugcwalisa iMoses Mabhida kwakuhle lokho,NgiwuKhuzani umfokaMpungose ngiyafisa ukukwenza lokho ungakakwenzi wena bese inyoni isuka nonoxhaka akukho Cassper wachanasa Kwazulu natal sikhona.Ake ngibuze Sizwe sakithi simthathe noma simyeke???#fillupmosesmabhidastadium ukuthi iyangichaza lensizwa ngokuzethemba kwayo.
A post shared by Khuzani"INdlamlenze"Mpungose (@khuzani_mpungose) on Dec 4, 2017 at 4:34pm PST